Infografika: Ny fanaovana Qodes Codes azo antoka | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 8, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Fantatry ny namako fa tsy mpankafy kaody QR (Quick Response) aho. Amin'ny fotoana ahitako kaody QR, fantaro raha te-scan azy io aho, sokafy ny telefaoniko, sokafy ny rindrambaiko hijerena ilay kaody… ary hadino izany - azoko atao ny nanoratra adiresy web tao. Mieritreritra ihany koa aho fa ratsy tarehy… eny, nolazaiko izany!
Toa fananganana kaody QR is fanamby. 58% amin'ireo nohadihadiana dia tsy nahazatra ireo kaody QR. Ny 25% amin'ireo nanaovana fanadihadiana dia tsy nahalala akory hoe inona izy ireo! Amin'ny fiarovana ireo kaody QR dia tsy vaovao ratsy daholo izany. Hampiasa kaody QR ny olona rehefa manantena fihenam-bidy izy ireo ary ampiasain'ny indostria hafa izy ireo mba hahitana angon-drakitra mahomby.
Ohatra vitsivitsy hitako fa noheveriko fa fampiasa tsara amin'ny QR Codes:
Tao amin'ny trano fisakafoanana iray any Atlanta, ny menio dia nampiasa kaody QR mba hahitan'ny mpamaky fanazavana fanampiny momba ny sakafo ao amin'ny menio an-tserasera.
Tamin'ny kaonferansa Webtrends dia natsangana ny fakantsary isaky ny fotoam-pivorian'ny kaonferansa hisamborana ny mombamomba ny badge mpitsidika. Io dia nahafahan'ny ekipa namantatra hoe iza amin'ireo fivoriana no be mpitia indrindra.
Mandefa tapakila amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny mpandray. Na izany aza, ny code barcode dia miasa ary koa ny kaody QR. Ary ny scanner barcode dia manjaka hatrany amin'ireo trano fivarotana.
Fampiharana mahasoa inona no hitanao amin'ny fampiasana kaody QR?
Heveriko ihany koa fa eo an-dafin'ny fampiasana teknolojia scan sy reconnaissance izay nandroso lavitra lavitra noho ny kaody QR izahay.
Mamolavola tanjona alohan'ny fampiharana finday
8 Aogositra 2011 amin'ny 6:28 PM
Nibilaogy momba ny kaody QR aho tamin'ny Desambra 2010 ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online ) ary eto ny sasany amin'ireo sosokevitro….
Toy ny Facebook ao amin'ny magazay: “Ankafizo miantsena eto? 'Tiako' izahay amin'ny Facebook. Sakano ity kaody QR ity amin'ny findainao. Aoka ianao ho voalohany hahazo tolotra sy fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook. ”
Ao amin'ny magazay Hisoratra anarana ho an'ny Gazety amin'ny mailaka na fanairana SMS. Hevitra mitovy amin'ilay etsy ambony. Aza hadino ny manolotra valisoa amin'ny fisoratana anarana. Hamarino tsara fa mora ny finday ny pejy fizarana kaody QR.
Ao amin'ny fampahalalana momba ny demografika na ny fanadihadiana: "Lazao kely anay ny momba anao ary mahazoa tapakila maimaim-poana". Manaova pejy fanadihadiana fohy momba ny finday ary ny pejy farany dia tapakila fivarotana azon'izy ireo ampiasaina ankehitriny.
Doka, bokikely, karatra asa vita pirinty: “Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba an'io. Sakano ity kaody QR ity amin'ny findainao. ” Vaovao ny kaody QR, saingy maro ny haino aman-jery pirinty manana fotoana mitarika amam-bolana. Miresaha amin'ny mpanjifanao momba ny drafitry ny fanontana ataon'izy ireo ankehitriny sy enim-bolana manomboka izao.
Mieritreritra mihoatra ny tontolon'ny mpivarotra. Vao haingana aho no niresaka tamin'ny marketing sy ny fampiratiana tao amin'ny tranombakoka lehibe. Nanoro hevitra aho fa afaka mametraka kaody QR amin'ny faritra fampiratiana sasany. Ny kaody dia afaka mampifandray amin'ny pejin-tranonkalany manokana amin'ilay zavatra aseho, na mampifandray amin'ny loharano misy Internet eo ivelany.